Umdlali wodumo usebizelwe enkantolo ngezinsolo zokubalekela intela | News24
Madrid – Isethenjwa somdlali weReal Madrid, uCristiano Ronaldo, esisolwa ngokubalekela ukukhokha imali yentela engu-€14.7m, sesibizelwe ukuba sizovela ngaphambi kwejaji eSpain ngomhlaka-31 Julayi, imithombo yezobulungiswa itshele i-AFP.
URonaldo, 32, okubikwa ukuthi usefunge wagomela ukuthi angeke aphinde ayidlalele iReal Madrid, ubizelwe enkantolo yaseMadrid ngomhlaka-31 Julayi ukuze ezophendula ngamacala amane okubalekela ukukhokha intela kwenani lika-14.7 million euro ($16.5m).
Ngaphezu kwalokho iziphathimandla ezibhekelele ukuqoqwa kwentela eSpain zifuna uJose Mourinho, umqeqeshi weManchester United, nosolwe ngoLwesibili ngokubalekela ukukhokha u-3.3 million euro ($3.7 million) wentela ngesikhathi ehleli eReal Madrid.
OLUNYE UDABA: U-CR7 utshele abaphathi ukuthi 'benze indlela yokumbuyisela kwi-Man U'
URonaldo ongeneme neze, nosewine indondo yokuba ngumdlali ovelele emhlabeni izikhathi ezine, sekunongabazane ngekusasa lakhe kulezi zinkunzi zaseSpain kanti useyamaniswe ne-United kanye namanye amaqembu amakhulu ngemuva kokumemezela ngentukuthelo ngesonto eledlule ukuthi unembeza wakhe “umsulwa”.
Ngokwemibiko yabezindaba, uRonaldo akasahleli neze kahle kuReal Madrid njengoba ekholwa ukuthi labo mpetha base-Europe abazange bamusekele ngokugcwele njengoba kade ethembile ekungabonini kwakhe ngaso linye nabaqoqi bentela.
Ngale kwalokho useke wakhononda izikhathi eziningi ngaphambilini ngabalandeli beReal, abebebuye babe nomkhuba wokumhhahhameza kwesinye isikhathi ngomdlalo wakhe enkundleni.
Kodwa-ke noma kunjalo uMengameli wale kilabhu, uFlorentino Perez, udalule ukuthi azikho iziphakamiso abesazitholile zokuthenga lo mdlali futhi le kilabhu ifuna ukumgcina.
Ngaphambilini iMarca ibike ukuthi uRonaldo usebatshelile ozakwabo ukuthi uyashiya futhi “akukho ukubuyela emuva”.
Iphephandaba lezemidlalo lasePortugal, i-A Bola, nalo libike ukuthi uPerez usevele usetsheliwe ngesinqumo salo mdlali.